Iyo mota yeramangwana inoshandisa Linux | Linux Vakapindwa muropa
Iyo mota yeramangwana inoshandisa Linux
Unenge watoziva izvozvo Linux iri kwese kwese, kungave pane maseva ewebhusaiti iwe aunoshanyira, pane yako mbozhanhare kana kunyange pakombuta yako wega kana iwe wakaita sesu. Kutenda kukambani AGL (YeMotokari Giredhi Linux), isu tichavawo neLinux mumotokari dzedu mune ramangwana, ramangwana riri padhuze kupfuura zvarinoratidzika.
Iyi kambani inotsanangurwa sekambani inopa mahara-ekushandisa mhinduro dzemhando dzese dzemotokari. Mhando zhinji dziri kujoina iyi shanduko, kusanganisira mabhureki ane mukurumbira akadai saSuzuki, Nissan, Toyota kana Ford seyakanyanya kukosha. Zvinotarisirwa kuti mune ramangwana mashandiro emota idzi anotakura Linux.
Chii kuva nemota neyako uchishandisa sisitimu Haisi chinhu chitsva, sezvo makambani anga achigadzira mota dzehunhu kwemakumi maviri emakore. Nekudaro, aya masisitimu anoshanda aive masystem ane proprietary software, chimwe chinhu chinoita kuti masisitimu aya anetse.
Izvo zviri kutsvagwa nekambani yeAGL gadzira yakabatana sisitimu yekushandisa yekushandisa mumazhinji mota. Iyi sisitimu yekushandisa ichave yakavakirwa paLinux uye yakagadzirirwa kuti igone kushandisa ese marudzi ese ekushandisa uye zvekushandisa mune angangoita mota dzese, isingafanire kuvimba nechero software.
Izvi zvinovhura huwandu hwakazara hwezviitiko zvevagadziri, iyo inozokwanisa kugadzira emahara-ekushandisa mashandiro ayo anodzora akasiyana mota mashandiro. Nenzira iyi, isu hatizo ganhurira pachedu kune zvinoshandiswa uye mashandiro ayo anosanganisira iyo fekitori mota, asi isu tichakwanisa kuwedzera mashandiro emota yedu zvakakwana kune kwedu kufarira.
Hapana mubvunzo izvi chichava shanduko chaiyo mumotokari yenyika. Ehezve, nekuti ikozvino isu tichafanirwa kumirira kwenguva yakati rebei kuti tinakirwe nesisitimu yekushandisa yeaya maitiro. Parizvino tinogona kuwana iyo AGL webhusaiti kwatichazopihwa rumwe ruzivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo mota yeramangwana inoshandisa Linux
KDE Neon yekuvandudza vhezheni nePlasma 5.9 ikozvino yavapo
Kodi 18 ichatumidzwa kuti Leia, mukuremekedza iyo Star Wars hunhu